Sidee loo noqdaa farshaxanka tattoo: aasaasiga in la ogaado | Tattoo
Sidee loo noqdaa farshaxanka tattoo: aasaasiga aad u baahan tahay inaad ogaato
Ma aha Cherry | | Fanaaniinta Tattoo
Hadaad waligaa isweydiisay sidee noqoneysaa farshaxanka tattoo maxaa yeelay ma jiraan wax aad ka doorbideyso adduunkan oo ah inaad rinjiga maqaarka si joogto ah farshaxankaaga, ha ka welwelin, halkan waxaan ku siin doonaa qaar ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya ee aad raaci karto si aad u hagto xirfaddaada.
Waxaad arki doontaa inaad baraneyso sida loo noqdo farshaxanka tattoo Ma ahan wax fudud oo dhan waxayna u baahan tahay dadaal badan iyo u hurid si aad si fiican u sameyso. Xaqiiqduna waxay tahay in guuldarro ku timaadda shaatiga ay kugu kici karto qiimo aad u sarreeya, adiga iyo macmiilkaagaba!
1 Baro sida loo sawiro
2 Si adag wax u baro oo xitaa inbadan tababar samee
Baro sida loo sawiro
Sida iska cad, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad barato kahor intaadan noqonin farshaxan yaqaanka ayaa ah inaad sawirato, mana ahan kaliya sifiican, laakiin si aad ufiican. Tattooing-ka kuma koobna oo keliya raadinta astaamaha maqaarka macmiilka, laakiin kuwa ugu fiican ee wax sawira ayaa leh qaab u gaar ah oo ah waxa iyaga kaga duwan kuwa kale iyo kan u horseedaya in la ogaado oo saf loogu galo albaabka istuudiyahooda.
Waayo, Muhiim ma aha oo kaliya inaad nuqul ka sameysan karto, laakiin inaad awood u leedahay inaad la kulanto caqabado dhab ah sida qaabeynta qaybahaaga oo ka dhig kuwo aad u cajaa'ib badan oo aad uga tagto qof walba afkiisa oo furan (maya, khiyaamada ah in lix iyo afarteeda aan sawirkaaga ka dhigo mid aan u qalmin).
Si adag wax u baro oo xitaa inbadan tababar samee
In kasta oo aysan jirin meel bixin kara aqoonsi rasmi ah oo ku saabsan sida loo noqdo farshaxan yaqaan 'tattoo artist'. Xitaa sidaas, Waxaa lagugula talinayaa inaad iska qorto koorso lagu xoojinayo aqoonta laguna dhaqmayo (sida ugu badan ee asxaabtaadu ay diyaar ugu yihiin inay helaan tattoo bilaash ah). Waxaad ka heli doontaa koorsooyin xarumo kala duwan, in kasta oo mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagu taliyay ay tahay midka ay bixiso Dugsiga Rasmiga ah ee Tattoo Masters, oo xafiisyo ku leh magaalooyin kala duwan oo furan ilaa 1984.
Mar alla markii aad baratay sida loo noqdo fanaan-gacmeed, dariiqaagu dhammaan maayo, maxaa yeelay waa inaad farshaxankaaga dhaqan gelisaa. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad ku barato daraasad aad jeceshahay ka hor intaadan bilaabin inaad furato taada si aad u sii xoojiso aqoontaada.
Waxaan rajeyneynaa inaan xallineyno shakigaaga ku saabsan sida loo noqon karo farshaxan yaqaan. Noo sheeg, khibrad ma u leedahay arimahan? Ma kula talin lahayd koorso ama talo qof? Xusuusnow inaad noo sheegi karto waxaad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » Sidee loo noqdaa farshaxanka tattoo: aasaasiga aad u baahan tahay inaad ogaato
Peter V dijo
Waad salaaman tihiin. Maqaal aad u fiican, oo daboolaya waxyaabo badan oo shaki ah oo aan dhammaanteen qabnay markii aan bilawnay tan. Waxaan bilaabay 3 sano kahor koorso ESAP ah ( https://www.esapmadrid.com/ ) runtuna waxay tahay inaan aad ugu qanacsanahay go'aankeyga ah inaan kuhogaamiyo nolosheyda shaqada wadooyinkan.
Jawaab Pedro V
Tattoo-ka cusub ee Janel Parrish ma noqon doono mid aan la ogaan
Micnaha taatuuga laanta saytuunka, maxay astaan ​​u yihiin?